Nin Dhallinyaro ah oo Geesi Ahaa | Carruurtaada Wax Bar
Nin Dhallinyaro ah oo Geesi Ahaa
Bal aan wax ka baranno wiil dhallinyaro ah oo abtigiis noloshiisii badbaadiyay. Wiilkan abtigiis wuxuu ahaa rasuulka Bawlos. Magaca wiilkan la ma yaqaano laakiin waxaan ognahay inuu geesinnimo weyn muujiyay. Ma rabtaa inaad ogaatid wuxuu sameeyay?—
Bawlos xabsi Yeruusaalem ku yaalla buu ku jiray. Ciise wacdiguu ka sameynayay aawadeed baa loo xiray. Niman xun baa jiray oo Bawlos necbaa. Nimankan wax xun oo shar badan bay ku tashadeen. Waxay yiraahdeen: ‘Sirkaalka sare aan ka codsano askartiisa inay Bawlos maxkamadda keenaan. Annaguna luuq waddada ku yaal baannu ku dhuuman doonnaa oo markuu Bawlos na soo ag maro waannu dili doonnaa!’
Wiilkii abtigiis Bawlos iyo sirkaalkii ciidanka buu uga warramay taladii xumayd
Bawlos wiilkuu abtiga u ahaa baa maqlay waxay ku tashanayeen. Bal muxuu sameyn doona? Xabsigii intuu tagay buu Bawlos uga warramay waxay sheegeen oo dhan. Bawlos isla markiiba wuxuu u diray inuu u sheego sirkaalka sare xumaantay ku tashadeen. Miyaad u maleysaa inay wiilkan ku adkayd inuu sirkaalka la hadlo?— Way adkayd waayo sirkaalka wuxuu ahaa nin muhim ah. Laakiin inanka inan geesi ah buu ahaa oo sirkaalkii wuu la hadlay.
Sirkaalka wuxuu ahaa nin arrintan wax ka qaban karo. Si Bawlos loo ilaaliyo wuxuu diyaariyay ciidan 500 oo askari ku jiraan! Wuxuu ku amray isla habeenkaas inay Bawlos magaalada Kaysariya geeyaan. Haddaba Bawlos ma badbaaday?— Haa wuu badbaaday. Nimankii xumaa ma ay weerari karin! Xumaantay ku tashadeen way suuraggeli waayday.
Sheekadan maxaad ka baran kartaa?— Adigaba sida wiilkaas oo kale baad geesi u noqon kartaa. Markaan dadka kale Yehowah kala hadlayno waa inaan geesi noqonno. Geesi ma noqon doontaa oo Yehowah ma ka sii hadli doontaa?— Haddaad sidaas sameysid qof kale noloshiisa baad badbaadin kartaa.
Falimaha Rasuullada 23:12-24
Matayos 24:14; 28:18-20
1 Timoteyos 4:16
Nimankii xumaa maxay ku tashadeen inay Bawlos ku sameeyaan?
Bawlos wiilkuu abtiga u ahaa muxuu sameeyay? Waxan maxay u ahayd geesinnimo?
Sida wiilkaas oo kale sidee baad geesi u noqon kartaa?
Wadaag Wadaag Nin Dhallinyaro ah oo Geesi Ahaa